Home » Lahatsoratra farany farany » Hotels & Resorts » Ny St. Regis San Francisco dia manonona anarana ho mpitantana jeneraly vaovao
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao • People • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny St. Regis San Francisco dia nanambara ny fanendrena an'i Roger Huldi ho mpitantana jeneraly vaovao
Ny St. Regis San Francisco, lahateny voalohany an'ny tanàna ho an'ny trano faran'izay lafo vidy, asa fanompoana mahafinaritra ary hakantony tsy manam-potoana, dia faly nanambara ny fanendrena an'i Roger Huldi ho amin'ny toeran'ny tale jeneraly. Mpitondra asa nahomby tamin'ny fandraisana vahiny nahomby tamin'ny famolavolana fandaharana sy fandraisana andraikitra vaovao, Huldi dia veterana indostrialy efa za-draharaha miaraka amin'ny traikefa efa ho 30 taona niasa tamin'ny Marriott International sy Starwood Hotels and Resorts.
Ny St. Regis San Francisco dia nanambara ny fanendrena an'i Roger Huldi ho mpitantana jeneraly vaovao.
Huldi dia mpitarika miasa amin'ny fandraisam-bahiny nahomby tamin'ny famolavolana fandaharana sy fandraisana andraikitra vaovao.
Huldi dia veterana indostrialy efa za-draharaha miaraka amin'ny traikefa efa ho 30 taona niasa niaraka tamin'ny Marriott International sy Starwood Hotels and Resorts.
Manatevin-daharana i Huldi Ny St. Regis San Francisco taorinan'ny valo taona naha mpitantana ankapobeny an'i W San Francisco, izay nitondrany ny fananana tany amin'ny LEED Platinum Certification ary nampiditra fandaharana mavitrika ary ankehitriny namboarina. Ho fankasitrahana ny fitarihan'i Huldi, ny American Hotel and Lodging Association dia nanondro an'i W San Francisco ho Hotely amin'ny taona 2016.
"Voninahitra ho ahy ny hiditra amin'ny anjara andraikitry ny mpitantana ao amin'ny The St. Regis San Francisco, malaza eran'izao tontolo izao noho ny hatsaram-panahy sy ny asa fanompoana manohitra azy," hoy i Huldi. "Am-pireharehana lehibe no nidirako tao amin'ny ekipa fakan-tahaka tao amin'ny The St. Regis San Francisco rehefa nihaona tamin'ny safidin'ny mpandeha taranaka vaovao izahay ary mitazona ny fenitra farany marika marika St. Regis."
Chef efa niofana ho matihanina, ny lalan'i Huldi ho any amin'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny dia tamin'ny alàlan'ny anjara asan'ny mpitarika kulinarina amin'ny fananana kintana dimy, trano voalohany, any Suisie teraka avy eo ary avy eo tany Aostralia, izay nahazoany mari-pahaizana bakalorea momba ny fitantanan-draharaham-pandraharahana tao amin'ny University of Bond.
Huldi dia mpitaingina bisikileta tia manao hazakazaka am-bisikileta ary mankafy mandeha an-tsambo eo amin'ny Helodrano San Francisco, ary tiany manokana ny mandeha an-tongotra lavitra miaraka amin'ny vadiny amin'ny làlana fitsangantsanganana maro an'ny Bay Area. Izy koa dia aficionado-piompiana tantely, izay mifanentana tanteraka amin'ny fandaharan-tantanan'ny hotely tantely sy fanoloran-tena amin'ny fomba maharitra.
Huldi dia mpikambana birao mavitrika ao amin'ny Fikambanan'ny dia any San Francisco, ny trano fandraisam-bahiny any California Hotel and Lodging Association's Foundation Hospitality, ary ny Filan-kevitry ny Hotely San Francisco.
Ny St. Regis San Francisco dia manolotra efitrano sy efitrano miisa 260, ireo rehetra ireo dia nohazavaina indray tamin'ny alàlan'ny orinasam-pananganana malaza any Toronto Chapi Chapo. Ilay famolavolana koa dia nahitana ny fihaonan'ny fihaonambe sy hetsika natao an'ny The St. Regis San Francisco 15,000 metatra toradroa, namorona faritra voadio sy milamina ary manavao izay natao hanamorana ny resaka sy fiaraha-miasa. Ny St. Regis San Francisco, toy ny fananana St. Regis rehetra, dia malaza amin'ny sonia Butler Service.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny The St. Regis San Francisco sy ny maro amin'ireo, tsidiho azafady.